raha nanotrona ny fizarana kojakoja sy filàna amin’ny andavanandro ho an’ireo sahirana teny an-toerana omaly. Antony io nanatanterahan’izy ireo hetsika hitsinjovana ny mpiara-belona fa tsy mijanona hatreo amin’ny fandoavan-ketra fotsiny. Mifanojo rahateo amin’ny ady ho amin’ny tsy fanjarian-tsakafo izay vinan’ny filoham-pirenena ihany koa izany, hoy hatrany izy. Ao anatin’ny fanarenana tanteraka ny firenena isika kanefa ny olona tsy maintsy miaina dia mila hafainganina, noho izany, izay hetsika izay. Mila tonga saina koa ny vahoaka fa tsy natao hipetrapetraham-potsiny io fa mila hanatanterahan’izy ireo ny hetsika tandrify azy eo amin’ny sehatry ny fambolena sy fiompiana. Sio sy Zinga ary Vary moa no nozaraina omaly tamina olona miisa 500 heverina ho tena sahirana ao anatin’ity kaominina ity. Tsy vitan’ny fampihodinana ny raharahan’ny kaominina fotsiny, toy ny fandraofana fako, fanadiovana lalana, fandrindrana fifamoivoizana sy mpivarotra no tena asan’ny kaominina fa mila mamokatra sy mampitombo ny harin-karem-pirenena ihany koa, indrindra, ho an’ny faritra indostrialy toa an’i Tanjombato. Mila mijery ny fahafahan’ilay kaominina mihary na “potentialité” mihitsy ny ben’ny tanàna fa tsy manao sonia mariazy sy taratasy be dia be anaty birao fotsiny, hoy hatrany ny fanazavany.